Gini kpatara na 777 maka P3D V4?
ajụjụ Gini kpatara na 777 maka P3D V4?
1 afọ 2 ọnwa gara aga #894 by Josh13215
Ruo oge, enweghi m ike ịchọta ihe ntinye 777 na-arụ ọrụ maka P3D V4. Ma ọ ga - abụ 'ọhụụ ọhụụ' ma ọ bụ akwadoghị P3D V4. Onye ọ bụla nwere ọrụ 777 na-arụ ọrụ maka V4?
Daa ekele na ụmụ okorobịa
1 afọ 2 ọnwa gara aga #896 by Gh0stRider203
E kpuchie nke a ugboro ole na ole n'ihu. LOT nke ụgbọ elu agaghị arụ ọrụ na P3D V4 ka ha na-emeghị ka, ma. a bụ di na nwunye eri m hụrụ ...
1 afọ 2 ọnwa gara aga #899 by Josh13215
Daalụ onye na-agba